BERIZIKY JEAN OMER: HO KANDIDA FILOHAM-PIRENENA NY PRAIMINISITRY NY TETEZAMITA TEO ALOHA
On juil 7, 2018 20 431
Sary sy soratra : Rakotonirainy Andry
Na tsy araka ny tokony ho izy aza ny fomba nametrahana ny fotoana sy datin’ny fifidianana, amin’ny maha olon’ny demokrasia an’Atoa Beriziky Jean Omer dia naneho ny fahavononany hirotsaka hifaninana amin’ny fifidianana ho filoham- pirenena izy.
Nampahafantarina teny amin’ny » Villa Franchise », tranon’Itompokolahy Zafy Albert, Ivandry izany.
» Maro ny lesoka hita tamin’ny filazana ny daty ny fifidianana, anisan’izany ny fanatanterahana azy ao anatin’ny fahavaratra . Teo koa ny tsy mba nakana ny hevitrin’ny heri- politika, indrindra ny olo- be aram- panahy (FFKM). Na dia tsy feno aza ny fepetra hanatanterahana ny fifidianana ho mangarahara, hita fa hanao amboletra ny mpitondra ny hanaovana izany. Zary lasa fitaovana itadiavan- tseza ny mpifidy », hoy ity praiminisitry ny tetezamita ity.
Anisan’ny nanohina azy ny zava-nitranga teny amin’ny kianja ny 13 mey farany teo, nanaovana fitaovana politika ny vahoaka.
» Tsy azo ekena intsony izany ka hijoro ny tenako. Noho ny zavatra tsy mety rehetra eto amin’ny firenena ankehitriny, mahatsiaro ho manana adidy aho amin’ny famerenana an’i Madagasikara amin’ny toerana misy azy. Izay no nanapahako hevitra hirotsaka kandida ho filoham- pirenena. », hoy hatrany izy.
Ny « SOA IOMBONANA » no loko hoentiny amin’izao firotsahany izao. Ahitana fikambanana maro isam- paritra izany. Misongadina ny antoko UNDD, notarihin’ny profesora Zafy Albert.
Tsy vahiny loatra eo amin’ny toen- draharam- pirenena sy ny fitantanana, efa niandraikitra ny masoivoho tany ivelany sy ny fampianarana tany toamasina, ankoatra ny naha voatendry azy ho praiminisitra ny marimaritra iraisana nandritra ny tetezamita, i Beriziky Jean Omer.
IAVOLOHA: EULALIE, L’HÉROÏNE D’ANDRANOMENA ARIVONIMAMO, CHEZ LE PRÉSIDENT RAJAONARIMAMPIANINA
AIX-EN-PROVENCE: MADAGASCAR PARTICIPE AU FORUM ECONOMIQUE
POLITIKA: NODIMANDRY ATOA MANANDAFY RAKOTONIRINA
COOPERATION : L’AMBASSADE DU CHINE A LA RESCOUSSE DES SPORTIFS MALAGASY
The United States Government offers six Million Mosquito Nets to Malagasy people